के तपाईलाई थाहा छ ? हामी किन सपना देख्छौ ? - kageshworikhabar.com
के तपाईलाई थाहा छ ? हामी किन सपना देख्छौ ?
हिजो राती तपाईले के सपना देख्नुभयो ? सपनाले मानीसहरूको आकर्षण बताउनसक्छ भनिन्छ। सपनाको पनी अर्थ हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि, सपनाले मानिसजातिलाई आकर्षित गरेको हो। हामीले देख्ने सपनालाई यथार्थको रूपमा महसुस गर्छौ वा सीधा बेवास्ता गर्ने गछौँ सपनाहरू दैनिक जीवनसँग सन्दर्भ राख्छन् ।
केहि मानिसहरु सपनाहरुको विश्लेषणबाट गहिरो लुकेका अर्थहरु पाउन सक्छन्। तर हामी यहाँ सपनाको बारेका विष्लेषण भन्दापनी सपना देख्नुको कारणको बारेमा कुरा गर्दैछौ। हामी विशेषगरी हामीले सपना किन र के कारणले सपना देख्छौं, कारण यस्ताे छ ।
सपनाहरूले हाम्रो मानसिक सु स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। गम्भीर सपनाहरूले निन्द्रा सताउछ तर सपनाहरूले चिन्ता र उदासिनतालाई कम गर्न सक्छन्। जुन एक उपचारको राम्रो प्राकृतिक पद्धति हो। याद गर्नुहोस् कि सपनाले तपाईलाई रोगहरू प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गर्दैन, तर कम्तिमा तपाईलाई सामान्यतया अधिक तनावमुक्त पारिदिन्छ ।
सपनाले हाम्रो मस्तिष्कलाई रिसेट गर्नमा मद्दत गर्दछ, जसले हाम्रो एकाग्रता र समन्वयमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसले हामीलाई दिनको समयमा ज्यादा फोकस हुने क्षमता प्रदान गर्दछ, जसले सायद तपाईको कमाइमा मद्दपुग्दछ।
यो अनौंठो लाग्न सक्छ, अनुसन्धानले देखाएको छ कि मान्छेहरु जो सपना देख्दैनन् उनीहरूको तौल सपना देख्नेहरूको भन्दा छिटो बड्ने गरेको पाइयो। जबकि यसको मतलब यो होइन कि निद्रामा सपना अपरीहार्य आहार हो। यसको मतलब यो हो कि निद्रा देखीने सपनाले, तपाईको पाचन प्रकृयामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
सपना नदेख्नु वा सपनामा देख्न नसक्दा, वास्तवमै मानिसमा भ्रमको मात्रा बढ्न सक्छ। मस्तिष्कमा सपना सिर्जना गर्ने प्रक्रिया वास्तविक लाग्ने भ्रम समान छ, यसले सही र भ्रम छुट्याउन सक्षम बनाउछ।
भावनाहरूको आकारा दिने
सपनाको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हाम्रो मनमा लागेका कुरा, हामीले दैनीक अनुभव गरेका भावनाहरूलाई आकार दिने गर्दछ । सपनाले कुनै पनि गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्न तपाईलाई सहयोग गर्नेगर्छ। मनमा बारम्वार आएका कुराहरू सपनामै भएपनी पुरा हुन्छन्।
याददासको समावेशी गर्नु
निद्रा, विशेष गरी सपना देख्नु हाम्रो शरीरको मुख्य समेकन प्रक्रिया हो। यसको मतलब यो हो कि यसले हामीलाई हाम्रो याददासको हार्ड ड्राइभमा सबै बचत गर्न स्वीकृत दिन्छ। त्यसैले सम्झनुहोस । सपनाको पछाडि यो पनी छ जहाँ सम्झनाहरू बनाइन्छन्, समालिन्छन्।
हाम्रो मस्तिष्क र हाम्रो सपनाहरुको मद्दले हामी सुरक्षित रूपमा अज्ञात परिस्थितिको लागि तयार हुने गर्छौ। केही सिद्धान्तहरूले भन्छ की सपना देख्दा हामीलाई आउदा परिस्थितिहरूसँग व्यवहार गर्न तयार हुन सहयोग पुर्‍याउँछ। हामीले देख्ने गरेका सपनाहरूले हाम्रो दैनकताको उपहार हो।
हामी कुन कुरामा आफ्नो ध्यान लगाउछौ त्यसको नै यो देन हो। यदि हामी देखेका सपनालाई केही हेरफेर गर्न सक्दछौं भने, हामी धेरै कुराहरू सिक्न र कल्पनासील बन्न सक्षम हुनेछौं।
Previous articleसवारी दुर्घटनामा प्रहरीको मृत्यु
Next articleसुन्दै अचम्म लाग्ने कपाल संग्रहालय, जहाँ हरेक सामाग्री कपालबाटै बने